Teendhooyin militari & bacda hurdada
teendhadaada waa biyuhu?
Haddii teendho waa biyuhu ma aha oo kaliya la xiriira column inta biyo ah dhar ah, waxa ugu muhiimsan waa design iyo sanco. Waxay arrintu u muuqataa fudud, laakiin aan u saami teendhooyinka suuqa waxaa ku guuldareysato inay sidaa sameeyaan, xataa waxaa ku xusan biyo column 5000mm. Thanks for qalabka baaritaanka roob gudaha, taas oo ka dhigi waxaa suurto gal ah in roob light in mar walba digniin, waxa ay naga caawiyaan si aad u ogaato suurtogalnimada kasta oo dareere deynayo in ay na loo hubiyo in ay awoodaan in ay soo saaraan teendhada biyuhu dhamaystiran.
Sida loo sameeyo teendho biyuhu?
First of dhan, haddii teendhada biyuhu la xiriira ma aha oo kaliya in ay wax, laakiin sidoo kale ku xiran design iyo sanco. Ka hor inta aadan dalban, inaad si fiican u weydiisan lahaa badeeco ah oo ku saabsan iyo hesho jawaab cad.
Marka labaad, waxaad u wada yeelan karaan oodo kala ah teendhadaada sida go'an si aad teendhada biyuhu la. Fadlan xusuusnow in aad wada leedihiin edbinta ah teendhadaada leh.
Sida loo aqoonsado teendho qofka sida badan?
Iyadoo la raacayo si ISO5912, waxaa jira 2 qaybood for teendhooyinkoodii. Category A miisaanka guud ee halkii qof aan ka badnayn 2.5kg, Category B miisaanka guud ee halkii qof ka badan 2.5kgs. Waayo Category B, qof kasta waa in ay leeyihiin meesha hurdo aan ka yarayn 200 x 60cm. Waayo Category A, oo dhererkiisu wuxuu guud ahaan waa in aan ka yarayn 195cm, width ee garabka waa in aan ka yarayn 58cm, madaxa & cagaha booska waa in aan ka yarayn 35cm. Haddii ay kugu adkaato inaad u xusuusan, kaliya waxay leeyihiin hay in qof kasta waa in ay leeyihiin meesha hurdo aan ka yarayn 200 x 60cm.
Sidee si ay u qeexaan teendho xaq u leh?
First of dhan, waa in ay waafaqsanyihiin sharciga meel laga iibin doono, sida iska caabin dabka suuqa North America.
Marka labaad, haddii hawo ah waa ku filan tahay. ISO5912 ayaa shuruud ku salaysan waxa ku saabsan. Laakiin teendhada waa in loogu talagalay sida uu heerkulka ee suuqa kala duwan.
Mar saddexaad, hubi in teendhada waa biyuhu marka laga reebo waxaa la qorsheeyo aan si aad u codsato biyuhu. Taasi waa shuruud aasaasiga ah laakiin aan u saami teendhooyinka dadka ku guuldareysato inay u oofiyo.
Soo, Strong, jir dabacsan oo raagaya.
Fifth, ku xiran tahay ujeedada kala duwan, waa in ay noqon design dhismaha kala duwan iyo dooran wax kala duwan. Haddii aad qabto wax shuruud kasta, si xor ah nala soo xiriir.
Waa in loo baahan yahay in ay isticmaalaan raad a, sida loo isticmaalo raad ah?
Raad ka walxaha fiiqan, sida dhagax xeebta, saamiga ilaalin kara teendhada dabaqa. oo dhan ma teendhada baahan raad ah.
Marka saaray raad a teendho ka yar, hubi in aadan haysan qaybo ka mid ah ka mid ah teendhadaada, sababtoo ah marka ay roobabku da'aan, biyo ka heli kartaa on raad oo ay maamulaan teendhadaada hoose oo la Tagnana waan dabaqa teendhada.
Ma aqaan sida badan nooca dhismaha tolidda ee jawaanka seexashada aad? Waa maxay farqiga u?
Waa maxay dhismaha tolidda bacda hurdada aad ka? Waa si fiican in uu taam u ah ujeedada? Ma badeeco idiin sheegay oo dhismaha loo isticmaalo bacda aad hurdada iyo feature ee dhismaha kasta? Sida caadiga ah, waxaa jira 2 dhismaha kala duwan ee suuqa, qolkii H iyo double qolkii H.
H Chamber The waa dhismaha ugu fudud oo ugu caansan, tolo qolof, ningax iyo si toos ah wada diyaarineysa. Dhismaha waxaa inta badan loo isticmaalaa daydo xagaaga-guga
Qolkii H Double , taas oo ah kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo Boorsada lagu seexdo heerkulka hooseeyo. Waxaa jira 2 layers gaar ah, qolof tolo daaha dibadda & hal lakab oo madhxiya wada iyo dahaarka tolo lakabka hoose iyo lakabka kale oo madhxiya wada, ka dibna si wadajir ah loo tolo 2 layers. Tani dhismaha H double ku yeelan karto ningax dheeraad ah iyo qaab ka fiican yahay qolkii H in ay sii jawaanka seexashada diiran. Ka dib markii badan oo imtixaanka ningax kaamerada la "masaasad kaamerada", waxaan ka heli weli waxaa jira "Points Cold", sidaas darteed waxaan ka codsan dhismaha H double la hagaajiyey.
Labada qol ee H ee la hagaajiyay, as it’s name shows, it’s improved based on double H chamber. The sewing line on double H for both 2 layers are at same level, thermal will loss through these “cold pints”. In order to solve this problem, we designed this improved double H chamber.
Ma Boorsada lagu seexdo aad biyuhu?
Haddii qof kuu sheego in Boorsada lagu seexdo waa biyuhu, waa inaad ka fakartaa haddii isaga / iyada waa in line this. Jawaanka seexashada waa in AANAY biyuhu, waxaa u baahan tahay in celisa biyo iyo breathable. Haddii Boorsada lagu seexdo waa biyuhu, ma breathable gaar ah qaar ka mid ah dhar heer aad u sarayso doono. Macaamilka dhididka doonaa, oo aad u dareento raaxo.
Waxaan leenahay cabashooyin badan dhibaatooyinka jiinyeer on bacda jiifnay, ma waxaad leedahay xal kasta?
waxqabadka jiinyeer on jawaanka seexashada la xiriira tayada jiinyeer iyo hurdada design bac. Waxaan leenahay jiinyeer leh tayo aad u wanaagsan, laakiin kaliya ku kici 30-40% jiinyeer YKK. Haddii qof kuu sheego in ay jiinyeer waa wanaagsan yahay, fadlan ha tijaabiyo laftiisa jiinyeer oo kaliya, aad si fiican u tijaabin lahaa jiinyeer ku jawaanka seexashada.
Waxay ku xiran tahay dhismaha Boorsada lagu seexdo kala duwan iyo waxyaabo kala duwan loo isticmaalo. Fadlan si xor ah nala soo socodsii haddii aad rabto in Boorsada lagu seexdo dhaqi ah mashiinka.
Ma buste geeduhu waa mashiinka la dhaqi karo?
Waxaan leenahay mashiinka buste geeduhu la dhaqi karo, laakiin dhammaantiin ma aha buste geeduhu waa mashing dhaqi karo. Fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin ah.
Sida loo hubiyo tayada wax soo saarka aad? Waa maxay cabirka waxaa aad qaaday?
Waxaan leenahay sharci adag loo baaro. qalabka oo dhan waa la baadhi doonaa oo dhan alaabta la dhammeeyayna waa la baadhi doonaa mid mid ka hor shixnad. Waxaad ogaan kartaa haddii aad alaab-baaris u samaysaa waxyaabaha aad adigoo haddii ay jirto xabbad default kasta. Waxa aan suurto gal ah in 100% ee alaabta ay gaarsiisan yahay heerka cabbirka.
Ma waxyaabaha aad kiimikada lacag la'aan ah iyo jawi saaxiibtinimo?
Inta badan waxyaabaha our yihiin jawi saaxiibtinimo. Laakiin suuqa sida kala duwan ayaa looga baahan yahay oo kala duwan, fadlan naga hubi wixii faahfaahin ah. Waxa kale oo aad u sheegi kartaa noo sheeg suuqa hadafkaagu yahay, ka dibna waxaan ku siin kara macluumaad waafaqsan.
aad ka bixin karto qiimaha ugu yar ee suuqa?
Waxaan qabaa in aan aan laga yaabaa in aad doorato wanaagsan haddii aad diiradda on qiimaha keliya. Waxaan ku siin karnaa qiimo aad u tartan rasmi ah oo ku salaysan design sheyga wanaagsan iyo tayada wax soo saarka fiican.
The tirada ugu yar ee si ku xiran tahay waxyaabaha kala duwan iyo faahfaahinta soo saarka. Sida caadiga ah ka 500pcs in 2000pcs, waxyaabaha qaar ka mid ah oo dheeraad ah, qaar ka mid ah wax ka yar. Fadlan nala soo xiriir si wax kasta oo kala duwan.
Haa, waxaan heysanaa koox xoog soo koraya. badeecada la soo saaray laga yaabaa sida ay codsigaaga.
Waayo-baarka, markii hogaanka ku saabsan tahay 7 maalmood. Waayo, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 45-60 maalmood ka dib qaadato lacagta deebaajiga. Markii ugu sunta rasaasta wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii jeer hogaanka our ma la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la shaqaalahayaga. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
Waa maxay lacag iyo qalab bixinta?
dheer Payment: deposit 30% ka hor, 70% dheelitirka dhanka ah nuqul ka mid ah B / L 10 maalmood.
qalab Payment: TT, L / C, ururka Western & Paypal.
kharashka maraakiibta waxay ku xiran tahay habka aad dooratid in aad hesho alaabta. Express waa ugu dhaqsiyaha badnaa, laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. By badda waa xalka ugu fiican ee mugga weyn. Mararka qaarkood, tareen. Sida saxda ah heerka xamuulka waxaa laga heli karaa oo keliya haddii aan ogaan faahfaahinta mugga, miisaanka iyo habka markabka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Maya 168-3, Wadada Waqooyiga Qingyang, Changzhou, gobolka Jiangsu, Shiinaha
3600pcs 3 xilli hurdo bac hurdo diyaar u ah s ...
Hal dariiqo oo loo laabo dhammaan teendhooyinka soo baxa-2
Hal dariiqo oo loo laabo dhammaan teendhooyinka soo baxa
Abuur teendho cusub
Xuquuqda daabacaadda - 20108-2020: Dhammaan Xuquuqda Aad Leedahay.